गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ्गको १०.५३ % लाभांश साधारण सभाबाट पारित | आर्थिक अभियान
गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ्गको १०.५३ % लाभांश साधारण सभाबाट पारित
पुस २९, काठमाडौं । गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ को मुनाफाबाट प्रस्ताव गरेको कुल १० दशमलव ५३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
कम्पनीले बिहीवार ललितपुरमा २०औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरी प्रस्तावित लाभांशलाई वितरणयोग्य बनाएको हो । कम्पनीको मंसिर १५ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले हाल कायम चुक्तापूँजी रू. ८६ करोड ४० लाखको आधारमा १० प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव ५३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको थियो ।
कम्पनीले गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम लाभांश वितरण गर्न लागेको हो । गत वर्ष कम्पनीले ८ प्रतिशत बोनस शेयर र कर प्रयोजनसमेतका लागि ३ दशमलव ४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । यस वर्ष कम्पनीले बोनस शेयरमा जोड दिएको छ ।
बोनस पश्चात कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ९५ करोड ४ लाख पुग्नेछ । कम्पनीको पुस २७ गतेसम्मको सिडी रेसियो ८६ दशमलव ४३ पुगेको छ । रू. ६ अर्ब ६४ करोड निक्षेप संकलन गरेको कम्पनीले यस अवधिसम्म रू. ५ अर्ब ७४ करोड कर्जा प्रवाह गरको छ ।
उक्त कम्पनीले हाल देशभर २२ ओटा शाखा कार्यालय र दुई ओटा एक्सटेन्सन काउन्टरहरुबाट वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । निकट भविष्यमा थप शाखा विस्तार गर्ने योजना रहेको पनि कम्पनीले बताएको छ ।